Isidlo Sasolwandle Esikhulu Kunazo Zonke: I-Flying Fish ne-Cou Cou yase-Barbados
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Culinary » Isidlo Sasolwandle Esikhulu Kunazo Zonke: I-Flying Fish ne-Cou Cou yase-Barbados
Isithombe sihlonishwa yi-Cooking&Cocktails
Kuthathwa njengesidlo sikazwelonke sase-Barbados, i-Flying Fish kanye ne-Cou Cou iresiphi ephelele yokuthi abathandi bezilwane zasolwandle bazame. Izinhlanzi ezimhlophe ezinoshukela, ezinoshukela nezinongwe kahle zinikezwa i-cou cou, ukudla okuyisisekelo kwaseBarbadian okusekelwe kumbila. Usukulungele ukufunda ukwenza lesi sidlo saseBarbadian ekhaya?
Indlela Yokwenza Izinhlanzi Ezindizayo kanye ne-Cou Cou?
I-cuisine yase-Barbados iyibhodwe elihle elincibilikayo lama-flavour agqamile ahlanganisa amathonya avela e-England, India, nase-Afrika ukuze kwakheke izitsha ezimangalisayo, ezihlukahlukene.
Abapheki be-Bajan basebenzisa inala enhle yomkhiqizo wasendaweni omusha ukuze bakhe ezinye zezidlo ezinambitheka kakhulu emhlabeni. Izidlo ezijwayelekile ze-Bajan ongase uhlangane nazo esiqhingini zihlanganisa uphaya we-macaroni, amakhekhe ezinhlanzi, irayisi nophizi, ama-conkies, ama-turnover kakhukhunathi, kanye ne-Barbados national dish flying fish kanye ne-cou cou.
Naphezu kwezitsha eziningi ezinhle e-Barbados, namuhla sizoxoxa nje nezindlela zokupheka zezinhlanzi ezindizayo kanye ne-cou cou ngoba uma kukhona isidlo se-Bajan ongeke ufune ukuphuthelwa yiso, yilesi!
Isidlo sikazwelonke saseBarbados siyisidlo esimnandi futhi abantu bendawo abaziqhenya ngaso.
Isihlabani sombukiso siyinhlanzi endizayo eshisiwe noma ethosiwe, ephelezelwa uhlangothi lwe-cou cou, okukhumbuza i-polenta noma ama-grits, kulabo abangajwayelene nokudla. Ijusi kalamula, izinongo kanye nemifino emisha inyusa ukunambitheka, kwakha isidlo esimangalisayo, esiyiqiniso se-Bajan.
Uma uzovakashela eBarbados maduze, kungcono ukulethele isifiso sokudla. Sizokutshela kabanzi mayelana nesidlo emizuzwini embalwa, kodwa okokuqala, nasi isizinda.
Iyini iFlying Fish?
Flying fish wuhlobo lwezinhlanzi ezidabuka esiqhingini saseBarbados. Eqinisweni, lezinhlanzi zake zazivame kakhulu emanzini alesi siqhingi kangangokuthi iBarbados iye yabizwa ngokuthi “izwe lezinhlanzi ezindizayo.” Ngakho-ke, ngeke kusimangaze ukuthi izinhlanzi endizayo ziyingxenye eyinhloko yesidlo sikazwelonke sase-Bajan.
Izinhlanzi endizayo zibaluleke kakhulu kubantu base-Bajan kangangokuthi uzobona uphawu olubonisa inhlanzi endizayo ngemali yezwe, futhi lufakwe kulogo ye-Barbados Tourism Authority.
Usazothola izinhlanzi endizayo kumamenyu ezindaweni zokudlela kuso sonke isiqhingi. Inhlanzi endizayo inambitheka kahle ngokuphekwa kalula, ngokushiswa ngejusi ye-lime ene-asidi, futhi iphinde ithoswe kahle. Hamba ku-Bajan fish fry ukuze uzame iresiphi yendabuko yezinhlanzi endizayo ezinikezwa abantu bendawo.
Iyini i-Cou Cou?
I-Cou cou isidlo oyothola kakhulu e-Barbados, kodwa ayindile kakhulu emhlabeni wonke. Uma ungakaze uzame ngaphambili, cabanga into efana ne-polenta noma ama-grits ekuthunjweni.
Yenziwe ngenhlanganisela ye-cornmeal ne-okra. Lezi zithako ezimbili ziyaphithana ndawonye zenze uhlobo lwephalishi elimnandi. I-Cou cou e-Barbados iyisitsha esifudumalayo nesiduduzayo esihambisana kahle nezinye izitsha ze-Bajan ezinongwengwe - njengezinhlanzi endizayo! Kuhle futhi ngamasoso ababayo, ozowathola kakhulu ku-Bajan cuisine.
Ngokuvamile, i-cou cou ihanjiswa ngendlela evamile, okuwukuyenza ibe yisimo se-oval, kusetshenziswa isitsha soqweqwe lwawo. Noma, uma ufuna ukuba yiqiniso ngempela, ungasebenzisa igobolondo legulana, elisuka esithelweni sesihlahla esitholakala sikhula endle ezindaweni ezishisayo naseMelika. I-Cou cou ingenziwa futhi ngezinye izithako, njengesithelo sesinkwa, ama-yam noma ubhanana oluhlaza.
I-Flying Fish kanye ne-Cou Cou Recipe
Ngokwesiko, abantu base-Bajan bapheka le recipe ngoLwezihlanu noma ngoMgqibelo, kodwa-ke uma ufunda ukuzenza eyakho ungayipheka noma nini uma ufisa! Gxilisa abangani bakho nomndeni ngalokhu kunambitheka okumnandi kwezindawo ezishisayo. Nansi indlela yokwenza.
4 izibopho zezinhlanzi endizayo (uma lokhu kungatholakali lapho uhlala khona, ungashintsha ama-sea bass)
Ingcosana ye-garlic powder
3 anyanisi wasentwasahlobo
Ama-2 clove egalikhi
1 tsp i-ginger entsha
1 upelepele webhonethi yesikotshi
1/2 tsp ingxube ye-spice
100 ml uviniga
pepper omusha omusha
5 g we thyme
10 g we-curry powder
5 g we-garlic powder
6 tbsp kawoyela womnqumo
140 g ufulawa
Okokuqala yenza isinongo. Hlanganisa zonke izithako ze-seasoning, ngaphandle kukaviniga, ku-processor yokudla kanye ne-pulse kuze kuhlanganiswe kahle. Faka unamathisele embizeni evalekayo bese wengeza uviniga. Shake kahle bese ufaka inkathi ngokuthanda kwakho. Uzofuna ukukushiya lokhu cishe amahora amabili ngaphambi kokukusebenzisa, ngakho-ke beka eceleni lokhu ukuze ukuthele.
Faka izinhlanzi nge-lime, usawoti kanye nopelepele.
Faka izithako ze-sauce epanini le-sauce bese ulethe ukuze ubilise, ngamafutha amancane. Engeza isipuni esisodwa sesinongo osilungiselele ngaphambilini.
Epanini elihlukile, hlanganisa izithako ze-cou cou, ngaphandle kommbila, bese ulethe ngamathumba. Uzokufuna lokhu ekushiseni okuphezulu. Uma sekuphekiwe, hlunga ingxube bese ulahla u-anyanisi ne-thyme. Gcina izingcezu ze-okra ozozisebenzisa kamuva.
Buyisela i-cou cou pan ekushiseni bese wengeza umbila, uhlanganise kahle uze wakhe ingxube ewugqinsi. Engeza ku-okra.
Isitsha sesilungele ukuphakelwa! Beka i-cou cou epuletini bese ubeka phezulu esitsheni ngasinye nge-fillet yenhlanzi kanye nomsizi onempilo wesoso futhi ujabulele ukunambitheka kwakho kwe-Barbados! Noma mhlawumbe, bhukha uhambo lokuya kulesi siqhingi esiyipharadesi esijabulisayo.
Ukuhlonishwa Izimbadada Resorts Barbados
Indlela engcono kakhulu yokunambitha isitayela sikaBarbados ukuvakashela iNew Republic of Barbados!
Ezinye izindaba mayelana ne-Barbados
Africa Barbados Izimbadada Yezimbadada Ezokuvakasha
Izindlu zeChampagne zaseFrance zigubha unyaka wokuqopha ngokudlabha
I-Lynx Air: Izindiza ezintsha ze-Halifax nemizila
I-Sandals Foundation Ihlinzeka Ngamathebulethi Edijithali...
Idatha Entsha Yokwelashwa Kwesifo I-Alzheimer's
Ubaba Uhlonipha Impi YeNdodana Ngokuthatha i-Mt. Everest
I-Breeze Airways iba yilungu elisha le-NACA
Umthelela Wobhubhane Engqondweni Yezingane...
IBlue Water izosebenzisa iHalesford Harbour Resort &...
I-Florida-Caribbean Cruise Association isebenzisana ne...
Cela Ukungafihli Ekuzibophezeleni Komphakathi kusuka...
Ukuthengiselana kwamahhotela aseYurophu: Ongakulindela ngo-2022
I-Vancouver Aquarium Yembula Umbukiso Omusha...
Imiphumela Ethembisayo ku-New Pancreatic Cancer Study
Ukwehla kwamehlo okusha ukwelapha ukubona okufiphele okuhlobene neminyaka
Isivakashi esikhethekile se-Aurora Expeditions ohambweni lwase-Coastal UK